दुर्भाग्यवश, अन तरकारी सलाद छुट्टी तालिका एकदम दुर्लभ राखे। धेरै यदि कुनै मासु, माछा वा समुद्री appetizer छ, त्यसपछि उत्सव मा यो गर्न केही छ भन्ने विश्वास गर्छन्। तर उत्सव तरकारी सलाद वास्तवमा, तिनीहरू धेरै, सबै थप त एक भोज समयमा खाना र यसको स्वाद र उपस्थिति को अब भाग मूल्यवान, बस त्यहाँ छैनन्। आखिर, राम्रो सेवा संग पनि banal सलाद साथै sumptuous भोज मा एक व्यवहार रूपमा मानिन्छ हुन सक्छ।
बच्चाहरु को लागि नुस्खा उत्सव तरकारी सलाद
सफलता को एक ग्यारेन्टी - वयस्क थप त्यसपछि सानो उम्दा खाना नियमित रुचाउने लागि, तिनीहरूले के खाने को स्वाद र लाभ रुचि राख्नुहुन्छ भने। कुनै पनि fussy खुसीसाथ अप प्रदान रमाइलो हुनेछ, र असामान्य हेर्न ब्रोकोली वा अन्य "शंकास्पद" gobbled उपयोगी छन्। तरकारी छुट्टी तालिका मा सलाद जस्तै लोकप्रिय व्यवहार रूपमा छोराछोरीको जन्मदिन वा अन्य उत्सव लागि, नियम, प्रयोग छैन, छैन भन्न सकिन्छ। एकदम फरक उदाहरणका लागि कथित हुनेछ, खाद्य toadstools टमाटर र अन्डा वा एक विशाल कीरा छाँट्दछ संग चुकंदर। गाजर सलाद, पनि, "hurray" मा जा हुन्छ यदि फाइल यो केवल खाना र एक शानदार खरायो लागि व्यवहार रूपमा। ओह, यो मामला मा, सबैलाई जादू तरकारी टुक्रा प्रयास गर्नेछ।2ठूलो मिठाई गाजर ठूलो स्याउ खट्टे लिनुपर्छ। तपाईं अझै पनि केही उसिनेर मेहनत उसिनेर (जस्तै साग) को सजावट लागि धमकी दिन अन्डा र कम बोसो खट्टा क्रीम, नुन र जडीबुटी आवश्यकता हो, केही सुकेको खुबानी वा छाँट्दछ थप्न सक्नुहुन्छ।
पहिलो तपाईं गाजर सफा गर्न र केही लामो, पातलो स्ट्रिप्स बनाउन एक तरकारी कटर प्रयोग गर्न आवश्यक छ। कोर को छुटकारा रही एकै समयमा पनि - अन्डा सफा, स्याउ छन्। त्यसपछि गाजर को शेष सहित सबै सामाग्री, सूक्ष्मता rubbed र सुकेको खुबानी वा छाँट्दछ - कट। सामाग्री को naturalness लागि कटा रिबन लपेटन अघि मिश्रित गर्दै छन्, यी "जादू गाजर" को नुन, अनुभवी खट्टा क्रीम र फारम, र तपाईं अलिकति यो सेंकना गर्न सक्नुहुन्छ, पकड डिजाइन। greenery को मद्दतले भन्दा माथि बनाउन।
ब्रोकोली को रूख
नयाँ वर्षको भोजन धेरै Housewives विशेष केहि संग अतिथि प्रभावित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। औपचारिक भोजन विकल्प को आम बीच संधै एक क्रिसमस ट्री को आकार मा छुट्टी तालिका मा तरकारी सलाद नेतृत्व। पूर्ण समानता, सामान्यतया विभिन्न जडीबुटी प्रयोग गरेर हासिल, तर यो ब्रोकोली florets रूपमा क्रिसमस सौन्दर्य को शाखा मा देखिन्छ रूपमा केही छ। त्यसैले, एक उत्सव मुड सिर्जना गर्न आवश्यक छ: एक जोडी को लागि उसिनेर ब्रोकोली, - 1 पीसी, उसिनेर आलु - सजावट लागि 1 पीसी, मिनी गाजर, रंगीन, क्यान्ड सिमी र चेरी टमाटर ...
पहिले तपाईं धेरै निर्माण गर्न आवश्यक छ "क्रिसमस रूख।" संलग्न ब्रोकोली florets Toothpicks को मद्दतले (स्थिरता को लागि) काटिएको तल एउटा आलु पकवान राख्दै बीचमा र यो यो गर्न। त्यसपछि यो टमाटर र सिमी रूपमा कार्य गर्नेछ जो "खिलौने", सजाउनु पर्छ। एक तारा को शीर्ष सेट गर्न सक्छन्, एक गाजर बाहिर यसलाई काटे। र मनपरी देखि बाँकी तरकारी फेंक। यो पनि एक सानो गाजर फैलियो। यो डिजाइन पाहुनाहरूको मा इच्छित प्रभाव उत्पादन गर्न निश्चित छ।
यो छुट्टी तालिका मा तरकारी सलाद किनभने केही प्रकृति नै सिर्जना प्राकृतिक जीवन्त रंग साथै सजाउनु गर्न सक्षम हुनेछ, मात्र सम्भव छ, तर बिल्कुल आवश्यक छैन राख्न भनेर बाहिर जान्छ।
चिकन, मशरूम र छाँट्दछ संग सलाद - एक उत्सव खाजा तयार
कुनै पनि छुट्टी लागि भुईँकटर सलाद
हरियो मटर संग सलाद। सरल व्यञ्जनहरु
को रोलर्स मा एक ब्रेक रूपमा
Bromelain। एक चिकित्सा वा विष: यो के हो?
बालक को लागि एक बच्चाको खेल सुट कसरी चयन गर्ने?
Domodedovo दक्षिण। आर सी "दक्षिण Domodedovo": समीक्षा, मूल्यहरू र फोटो
सन तेल: लाभ र हानि। सन तेल को समीक्षा
तेल भोल्टेज ट्रांसफार्मर
यौवन: समस्या र समाधान